ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - အားကစား
ဘောလုံးကွင်းထဲကနေ paragliding ရန်နှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို - Cariocas အားကစားချစ်ကြတယ်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၌ရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကမ်းခြေ, သစ်တောနှင့်ခန္ဓာကိုယ် Cariocas အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတူမှေမေတ္တာကိစ္စများအလယ်၌ရှိကြ၏ဟူသောအချက်ကိုမှ attests ။
ငါရီယိုအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်များပါဝင်ပတ်သက်ရရန်မည်သို့ရက်တွင်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များနှင့်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များပေးအပ်ခြင်း, တောင်, ကမ်းခြေတွေ, ပင်လယ်ရေနှင့်လေထု၏အားကစား Recreational စူးစမ်း LOVE ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လူကြိုက်များပြိုင်ကားကိုခေတ်သစ်ထိုကဲ့သို့သောလျှော့-line နှင့်မတ်တပ်ရပ်-up ကလျှောအဖြစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်မြင့်တက်မှုများ, သင်တန်းတွေ, ဒေသခံအသင်းများ, gyms နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နဲ့တွဲပြီးဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါသည်။
လူအအကောင်းဆုံးအပူချိန်မှာနေဖြင့်လမ်းများဆွဲသကဲ့သို့ပူနွေးသောရာသီဥတု, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ​​်နေသာမြို့သူမြို့သားဖြစ်ခြင်း, တစ်ဦးအစိုင်အခဲအားကစားယဉ်ကျေးမှုကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်ပါသည်။ နေသာရက်, အပူ, အပြာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအားကစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမွို့ထဲမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍမှဘယ်မှာတစ်ဦးအပြင်းအထန်ပြင်ပတွင်ယဉ်ကျေးမှု, ဖန်တီးခဲ့သည်။
ရေကူး, တောင်တက်များအတွက်သစ်တောများနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ဤလောကအတွက်အကြီးမားဆုံးအများစုကပျော်စရာအများစုကကွဲပြားခြားနား, Open-လေကြောင်းရန် gyms တ်လုပ်တက်ပြီးအဘို့အတောင်ကမ်းခြေ။ မြို့တော်ကိုတလျှောက်လုံးအားကစားပွဲများ Cariocas လူမှုရေးနှင့် grandiose မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောအဘို့မိမိတို့ predilection နှင့်အတူအားကစားဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုပေါင်းစပ်ဖို့အတှကျစံပြ setting ကိုဖြစ်ကြ၏။
အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ, Surf, ကမ်းခြေဘောလုံး, volley ဘောလုံးကိုခြေ volley, ကျွမ်းဘား, ရွရွပြေးတာနဲ့တောင်မှချိန်-ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ - အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူအပေါင်းတို့သည်အားကစားမျိုးကိုကစားအများအပြားကမ်းခြေ, နေ့နှင့်ညဉ့်၏ကမ်းခြေတလျှောက်ကိုစုသိမ်း။ အသက်ကြီးသောသူတို့သည်မြို့ရဲ့စီရင်စု၏သင်တန်းတွေယဉ်ကျေးအတွက်အခမဲ့ gyms နှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းပျော်မွေ့နေစဉ်လူငယ်များအဖွဲ့, လူအပေါင်းတို့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်ဘောလုံးသင်ယူကြသည်။
အပြာရောင်ရေသည်တစ်နေ့တာအတွင်းဝါဒီများကိုစွမ်းအားနှင့်နေဝင်ချိန်မှာညှို့ - အစဉ်အမြဲ surfers, ခန္ဓာကိုယ်ပဋ္ဋိပက္ခ, ရေကူးသမားနှင့်ရေငုပ်သမားကြိုဆို။ volley, ကမ်းခြေ volley, နံရံဆေးရေးပန်းချီဘောလုံးကို, ကမ်းခြေဘောလုံးနှင့်ရီယိုရဲ့အားလုံးအချိန်အကြိုက်ဆုံးအားကစားကစားသောအခါတစ်ဦးတရာကမ်းခြေ၏အဖြူရောင်သဲကတ္တီပါကဲ့သို့ခံစား "altinha ။ "
သစ်ပင်ပန်းမန်, ပန်းမန်များနှင့်အတ္တလန္တိတ်မိုးသစ်တော၏မမေ့နိုင်သောထောင့်၏ကြွယ်ဝသော - Green ကမြို့ပြဒေသသစ်တောများကိုနေအိမ်အဆင်းလှသောရေတံခွန်များ, အသေးစားရေကန်, မြေကြီးပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဂေဟစနစ်အချို့ကိုဖြတ်သန်းလမ်းကြောင်းမှဖြစ်ကြသည်။ ရေကန်များနှင့်ဂွကို skyline ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နှင့်ကိုယ့်စက်ဘီး, စကိတ်စီး, ရွရွပြေးတာနဲ့ပွေးဘို့ဖန်ဆင်းတော်သောလမ်းဖြင့်ဖော်ပြထားကြသည် - ယခုအချိန်တွင်ကိုယ်တိုင်ကထက်ပိုသော်လည်းအဘယ်သူမျှမကအခြားအတူ။
ကျောက်တောင်တောင်ကုန်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ, ကျွန်းများနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြို့ရဲ့တမူထူးခြားတဲ့အမြင်များ၏အခွင့်ထူးအမြင်များဝင်ငွေမှကျောက်တောင်တက်သမားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏အာရုံပေးမည်ဟုဒါဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောထိပ် - တောင်တက်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ခုန်ခြင်းနှင့်ရီယို၏မိုဃ်းတိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရသူအပူပိုင်းငှက်များလာမယ့်သွားလာဆွဲထားသူကိုရဲရင့်မှ။
တစ်အများပြည်သူနှင့်ဒီမိုကရေစီနည်းကျအာကာသအဖြစ်, ရီယိုရဲ့ကမ်းခြေအားလုံးလူမှုရေးနောက်ခံနှင့်အရည်အချင်းများထံမှလူအတူတူလာနှင့်အားကစား Recreational ပျော်မွေ့ဘို့စံပြ setting ကိုဖြစ်ကြ၏။ ရိုးရှင်းစွာနေရောင်ရဲ့ရောင်ခြည်ထိုင်ထစိမ်ဖို့တွန့်ဆုတ်, အရှိဆုံး Cariocas ဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူပိုမိုတက်ကြွစွာနှင့်မိုဘိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်ရွေးချယ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နှင့်သဲမြေပြင်အနေအထားအဘို့စုံလင်သောကွဲပြားခြားနားသောအားကစားတစ်အရေအတွက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးကြပါပြီ။
ရီယိုနီးပါးရှိသမျှကမ်းခြေမှာကစားသောတစ်ခုမှာအားကစား, မခွဲခြားဘဲအရွယ်အစားနှင့်လူဦးရေ၏, "futebol က de areia," သို့မဟုတ်ကမ်းခြေဘောလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပိုကြီးတဲ့ကမ်းခြေတွေ, မှာ "Praia, Flamengo ပြုပါ" နှင့်ရီယို၏အနောက်ဇုန်၏ဧရိယာများအတွက်အပနျးဖွထံအပ်နှံသဲပိုက်ကွန်နှင့်ဝေမျှရှိပါတယ်။ Altinha သို့မဟုတ် "အနည်းငယ်သာမြင့်က" ဘောလုံးပေနွားသငယ်, ဒူး ထောက်. , ပခုံးနှင့်ဦးခေါင်းသုံးပြီးကစားသမားစက်ဝိုင်းအကြားလေထုထဲတွင်အောင်မြင်ပြီးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေစည်းမျဉ်းကို - ဘောလုံးကိုခပ်သိမ်းသောကာလမှာခညျြနှောငျလေထုထဲကျန်ရှိနေကြောင်း - အားကစား၎င်း၏အမည်ကိုချေးငှားသည်။
နောက်တစ်ချက်အားကစားပညာရှင်များနှင့်အပျော်တမ်းကသူတို့ရဲ့အခွက် flaunt နှင့် hone မှလာသည့်နေရာတွင်ဘောလီဘောနှင့်တရားရုံးများနီးပါးတမြို့လုံးအတွက်ကမ်းခြေ၏မှာ beachfront တန်းစီတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Cariocas နှင့်ဧည့်သည်များအဘို့အရီယိုရဲ့ကမ်းခြေစုပြုံထားတဲ့ water-based အားကစားတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဌန်လည်းရှိပါတယ်။ အဖြစ် Copacabana ၏ခရိုင်၏ခေတ်မှီတဲ့ကမ်းခြေတွေ, Ipanema - surfers နှင့်ခန္ဓာကိုယ်-ပဋ္ဋိပက္ခကို Barra ကို da Tijuca ရပ်ကွက်အတွင်း၏ကြမ်းတမ်းသော, သန့်ရှင်းသောရေကို ယူ. , နောက်ထပ် afield အနီးအနားရှိ Recreio ဖို့နေစဉ်ရေကူး, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရကေူးနှင့်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အုပ်စုများတွင်စုရုံး နှင့် Leblon ။
လှိုင်းတံပိုးမှတဆင့်ငုပ်တစ်လျှောအသုံးပြုနေစဉ်တစ်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ရပ်နေပါဝငျကွောငျးတစ်အားကစား: ယခုအချိန်တွင်မှာ, Stand-Up ကိုရေနွေးရီယိုအတွက်ဖက်ရှင်ကိုရေအပနျးဖွဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်မှုရေကန်နှင့်ဂွပေါ်လေ့ကျင့်ဖို့လွယ်ကူပြီးပျော်စရာလည်းသဘာဝရှုခင်း၏ထူးခွားသောအမြင်များဖြင့်လိုက်ပါသွားအေးချမ်းမှုကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တဖန် 70 နှင့် 80 ၏ macho နှင့်သူပုန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်စပ်, စံ Surf နေဆဲရီယိုရဲ့တန်ပြန်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ - နှင့်မြို့အားဖြင့်လွှမ်းလေ၏ထိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေမှုကြောင့်ကြီးမားသောအောက်ပါအချက်များကိုကြီးပွားသတည်း။ ဒေသခံ surfing အုပ်စုများကိုအချိန်နှင့်ရီယိုရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလှိုင်းချန်ပီယံအတူတကွရောက်စေဖို့ပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမွှုပျနှံ။
အဆိုပါကမ်းခြေရီယိုရဲ့အဓိကခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကကိုယ်စားပြုပြီးနှင့်ဒေသခံများသူတို့ကိုကြီးစွာသောအသုံးပြုမှုစေ။ သို့သျောလညျး, ဘောလုံးအထွေထွေ Carioca အားကစားယဉ်ကျေးမှု၌အမြင့်ဆုံးအောက်ပါအချက်များကိုရှိပါတယ် - လူရဲ့စိတ်ထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအရိုးစွဲ, ကနေ့စဉ်အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာဝေးသဖြင့်ဘရာဇီးမှာအများဆုံးတလေးတစားဆက်ဆံအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မျှမရှိချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးလူမှုရေးကွဲပြားခြားနားမှုကျော်လွှား၏အထူးဝိသေသရှိပါတယ်, ပဲနှင့် ပတ်သက်. ဘယ်နေရာမှာမဆိုကစားနိုင်ပါတယ် - အဲဒါကိုကိုပြုသကဲ့သို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းအကြောင်းရင်း။ တကယ်တော့ဇိမ်ခံမြို့ဆင်ခြေဖုံးကဲ့သို့သောအများကြီး favelas အတွက်အဓိကအအားကစားပွဲများပတ်လည် revolve ။
1894. ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဒါ့အပြင်အားကစားရဲ့ကျော်ကြားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့သည့်အကြောင်းရင်း၏အစိတ်အပိုင်းကြောင့်မြင့်မားတဲ့လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ, အနေအထား၏ကျယ်ပြန့်ကစားနိုင်ပါတယ်ကတည်းကဘောလုံးဘရာဇီးယဉ်ကျေးမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Cariocas ၎င်း၏သဲသောင်ပြင်ကနေ favelas ၏အကွေ့အကောက်လမ်း, မြို့အနှံ့ဘောလုံးကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများ honing တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Cariocas အမျိုးမျိုးသောအသင်းများနှင့်အတူအသည်းအသန်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုင်ပြီးလိုက်ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ချန်ပီယံရှိပါတယ်။ အဆိုပါ "Campeonato က de Futebol Carioca," သို့မဟုတ် Carioca ဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်, 1906. ကတည်းကတယောက်တည်းသောအသွင်သို့မဟုတ်အခြားလက်အောက်တွင်တည်ရှိခဲ့သော ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်ယှဉ်ပြိုင်မှု, အဆိုပါလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ရေပန်းအစားဆုံးအောင်မြင်တဲ့အသင်းတွေ Flamengo, Botafogo, Vasco နှင့် Fluminense ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးအပါဆုံးအမျိုးသားရေးခွက်ဖလားကိုလူကြိုက်များသော 1959 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်လေးယောက်ကွဲပြားခြင်းရှိပါတယ်ခဲ့သည့် "Brasileirão" အဖြစ်လူသိများ "Campeonato Brasileiro," သို့မဟုတ်ဘရာဇီးချန်ပီယံရှစ်, ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ "Copa Brasil ပြု" သို့မဟုတ်ဘရာဇီးဖလားဘောလုံးပွဲ 1989 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်နိုင်ငံတွင်းရှိပြည်နယ်များ၏ပိုကြီးတဲ့ Cross-အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများတစ် သာ. ကြီးမြတ်သောသူအရေအတွက်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ ဤအအမျိုးသားရေးပြိုင်ပွဲနှစ်ခုစလုံး၏ချန်ပီယံလိဂ်ကို "Copa Libertadores da အမေရိက," သို့မဟုတ်အမေရိကတိုက်၏ Liberty သည် Cup ပြိုင်ပွဲအတွက်အစက်အပြောက်အာမခံချက်ရှိပါသည်။
ရီယိုရဲ့အံ့သြဖွယ်မတူကွဲပြားသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်ရှုခင်းအားကစားလှုပ်ရှားမှုများကျယ်ပြန့်ဖို့ကိုယ်တိုင်ကချေးငှားသည်။ သစ်တောများတောင်တောင်တက်, တောင်တက်နှင့်သည်းခံခြင်းကိုပွားအားကစားဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။
ထိုပန်းခြံတစ်လျှောက်အများဆုံးအထူးသဖြင့် "Aterro က de Flamengo," သို့မဟုတ် Flamengo Park ကပေါ်, အပြေးသမား, တင်းကျပ်စွာ-ကြိုး Walker, အလေးချိန်-lifters, ကိတ်စီးနှင့်စက်ဘီးသမား၏ထုဟာသူတို့ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုကွေးနှင့်နေ့၏ဖိစီးမှုကိုပယ်ချွေးထွက်မှစုရုံး။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းပြေးမှန်မှန်ကြံ့ခိုင်ရေးမြတ်နိူး၏ကြီးမားသောကျိူးသက်ရောက်မှုရှိလာအတူတကွရောက်စေဖို့တမြို့လုံးအနှံ့ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။
Capoeira တိုက်ခိုက်ရေး, ကခုန်, ဂီတနှင့်ပြဇာတ်ပေါင်းစပ်နှင့်အုပ်ကြီးနှင့်ဒေသန္တရဖို့ဖျော်ဖြေသောအနုပညာရပ်တစ်ခုပုံစံနှငျ့အားကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကခုန်ရွေ့လျားအတွက်သူတို့ကိုပုန်းအောင်းနေဖြင့်တိုက်ပွဲများနည်းပညာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်း၏တစ်လမ်းအဖြစ်အာဖရိကအမွေအနှစ်ဘရာဇီးကျွန်ခံသဖြင့်အစောပိုင်း 16 ရာစုအတွင်းကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ နှောင်းပိုင်းတွင် 2014 ခုနှစ်တွင်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂ၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် status ကိုအပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိက gyms နှင့်အားကစားကလပ်အသင်းရှိသမျှကြံ့ခိုင်ရေးအရသာကျေနပ်အောင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတန်း၏ကျယ်ပြန့်ပေးအပ်ခြင်း, ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ မြို့သူမြို့သားကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာစွာနေထိုင်ရန်အဖို့အဖိုးထိုက် tool အဖြစ်ရီယို၏တန်ဖိုးကိုမီးမောင်းထိုးပြကြော်ငြာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများမှတဆင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများမှတစ်ဦးတက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုအားပေးအားမြှောက်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများအဘို့အများပြည်သူ gyms များစွာအတွက်အများအပြားပန်းခြံများ, ဥယျာဉ်များ, နှင့်ပင်ကမ်းခြေတလျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့အနှံ့နေရာချကြသည်: အစိုးရမှအခမဲ့ပြင်ပတွင် gyms နှင့်ထဲမှာကိုယျခန်ဓာအလေးတက် setting ၎င်း၏လူဦးရေ၏၏ကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်လာဖို့အောင်မြင်သောကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားအစပျိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည် အပန်းဖြေကြံ့ခိုင်ရေးလေ့အကျင့်မှ access ကိုအားပေးဖို့နဲ့ချဲ့ထွင်ဖို့ပန်းခြံနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့တစ်အများအပြားဂွနှင့်အတူလက်ျာဘက်ကမ်းခြေအနားမှာ built 4400 ကျော်စတုရန်းကီလိုမီတာ၏ဧရိယာနှင့်အလွတောင်ကုန်း, သစ်တောများနှင့်ကျောက်တောင်ဖွဲ့စည်းမှုဘေးမှာမှတဆင့်သက်တမ်းတိုးရေး, ကြီးမားတဲ့မြို့ဖြစ်၏ - ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးဤမျှလောက်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါသည် ထို Cariocas တို့တွင်အတန်ဖိုးထားနှင့်ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးမှာပါတဲ့အမြင်များနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၏အချို့သောဖြတ်ကျော်အများအပြားသောမြို့ပြနေစက်ဘီးလမ်းကြောင်း, ကျော် 360 ကီလိုမီတာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဘော်လီဘော, ရွက်လှေ, မော်တာပြိုင်ကား, စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာ, jujitsu နှင့် capoeira အမြဲရောနှော Cariocas နှင့်ဧည့်သည်များအများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင် - အချို့သောအားကစားလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့အလွန်ဖြစ်သကဲ့သို့, သူတို့အတှကျအရေးကွီးခရီးသွားဧည့်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်လာ။
ယနေ့, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့လောကီသားတို့သည်အားကစားမြို့တော်ထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည် - နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုအဆုံးမဲ့စမ်းချောင်းများအတွက်မြေသြဇာမြေပြင်ပံ့ပိုး၏ခြင်္သေ့မှ host ကိုကစားခြင်း။
Sport နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမှရီယိုရဲ့ကတိကဝတ်အသိအမှတျပွုဖို့, မြို့ကို 2014 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှမမေ့နိုင်သော host ကိုတီးခတ်နှင့် The မြို့သူမြို့သားနှစ်ပတ်လည်ရီယိုအားကစား Show ကို, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်တရားမျှတ, အိမ်ရှင်အဖြစ် 2016 ၏မြင့်မားသောဂုဏ်သတင်းအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည် ဝန်ဆောင်မှု, gyms နှင့်ကလပ်အသင်း။
2015 ခုနှစ်, ပြည်နယ်ရှည်လျားပြေးအပါအဝင်တည်ရှိမှု၏ရီယိုရဲ့ 450th နှစ်, အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အားကစားပွဲများတစ်အရေအတွက်နှင့် Leme နှင့် Recreio dos Bandeirantes ၏ distrcits အကြားကမ်းနားတစ်ဝှမ်း 14 ခုကွဲပြားခြားနားသောအားကစားနှင့်အပန်းဖြေဖြစ်ရပ်များစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကျင်းပခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, မြို့ကိုလည်းတဆယ်ခုနစ်နိုင်ငံပေါင်း၏ပါဝင်မှုကနေအကျိုးပြုပေးသော Capoeira ၏ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ, အိမ်ရှင်အဖြစ်။ ယှဉ်ပြိုင် Capoeira အနုပညာရှင်တွေတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုဖို့သူတို့ရဲ့အခွက်တခုအဖြစ်နှင့်မြင့်မားသောနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဆည်းကပ်လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ "Desafio da Paz" (ငြိမ်းချမ်းရေးစိန်ခေါ်) ကိုကမ္ဘာကျော် Grupo ယဉ်ကျေးမှု Afroreggae (Afroreggae ယဉ်ကျေးမှု Group က) ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့်ရီယိုအများဆုံး Illustrious favelas ၏ Backstreet အတွက်နေရာယူကြောင်းဖြစ်ရပ်များ, ကာမဂုဏ်ကြသည်။
အဆိုပါ Desafio da Paz ကိုမြို့ပြဧရိယာကိုဖြတ်ပြီးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုး hosting, မြို့ရဲ့အားကစားပြက္ခဒိန်၏သက်ဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုကျောထောက်နောက်ခံတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းလူမှုရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်းကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားသီးအပွမြှင့်တင်ရန်မှအလိုရှိ၏။
Favelas ဝေါဟာရအရာတစ်ဦးကပေါ်ပြူလာအားကစားအပနျးဖွစွန်-ပျံသန်းဖြစ်ပါတယ်။ Young ကအဟောင်းဒေသခံများကစှနျတှရေဲ့ဆောက်လုပ်နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ပြိုင်ပွဲပို့ချ၏အနုပညာပြည့်စုံနှစ်ပေါင်းကုန်ရပြီ။
တစ်မြို့သူမြို့သားကစားရန်ဆန္ဒရှိသူအပေါင်းတို့အားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းချဲ့ထွင်ဖိတ်ခေါ်ရန် - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့သဘာဝကျကျထွက် သွား. နှင့်အားကစားလေ့ကျင့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်, နေသာခြ​​င်းနှင့်ပူနွေးဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော်ကိုတလျှောက်လုံးအားကစားပွဲများ Cariocas လူမှုရေးနှင့် grandiose မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောအဘို့မိမိတို့ predilection နှင့်အတူအားကစားဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုပေါင်းစပ်ဖို့အတှကျစံပြ setting ကိုဖြစ်ကြ၏။
ကနိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲအဖြစ်အားလုံးပါဝင်နိုင်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုအဆုံးမဲ့စမ်းချောင်းများအတွက်မြေသြဇာမြေပြင်ပံ့ပိုး၏ခြင်္သေ့မှ host ကိုကစားခြင်း - ယနေ့, ရီယိုလောကီသားတို့သည်အားကစားမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, မြို့ဒေသခံများထံမှသည့်နိုင်ငံတကာမှစကေးအတွက်အထိအားကစားပွဲများတစ်အရေအတွက်အား HOST ။ ငါရီယိုနှစ်ခုလုံးအလွန်မြင့်မားမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အသေးစားအများပြည်သူသင်တန်းတွေအပါအဝင်ဒေသခံပြိုင်ပွဲ, ကြိုတင်လူမျိုးနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပတျဝနျးကငျြလှုပ်ရှားမှုများကိုသို့ကြည့်ရှု LOVE ။